လေနုအေး: Happy Call မုန့် ပြားသလက် နဲ့ လမ်းသရဲမုန့် 
Posted by တန်ခူး at 8:16 PM
စားချင်စရာလေးပဲ အမတန်ခူးရေ ...
ကိုယ်တိုင်လုပ်တော့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း စားရတာပေါ့နော် ...
အားမှ လုပ်စားကြည့်အုံးမယ် ... ဆန်မှုန့်တွေ ၀ယ်ပြီးသား ရှိနေတာ အတော်ပဲ
သူငယ်ငယ်တုန်းကတဲ့ မုန့်ပြားသလက်ဆိုင်ကို ခရမ်းချဉ်သီးတွေ ငြုပ်သီးစိမ်းတွေ ယူသွားပြီး
မုန့်သည် အဒေါ်ကြီးက ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ဒီကောင်လေးဆိုပြီး နောင်တွင် လမ်းသရဲမုန့်ဟု အမည်တွင်မည့် မုန့်ကို လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့...
နောက်တော့ အဲ့ဒီမုန့်ဟာ ဘယ်လောက်ထိ နာမည်ကြီးသွားသလဲဆိုရင်
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲက ခေါ်ခိုင်းလို့ အဒေါ်ကြီးမှာ နန်းတွင်းထဲထိ ထိုမုန့်ကိုသွားလုပ်ပေးရပါသတဲ့...
လမ်းသရဲမုန့်၏ စဦးတည်ထွင်သူမှာ သူသာလျှင် ဧကန်စင်စစ်ဖြစ်ကြောင်း ကိုဧရာမှ အယင်ကလည်းပြော...
မနက်ဖန် လုပ်ကျွေးပါ့မယ်လို့ ဂတိတွေပေးလိုက်ရပါပြီ...
အေးလေ... အေးလေ... တိုက်တွန်းရုံနဲ့ ဖြစ်မလား ဟက်ပီးကောအိုးလေးပါ ဝယ်ပေးမှပေါ့... ခိခိခိ...
(((မောင်နှမ ဆိုတော့ တသံထဲ ထွက်တယ်...)))
နင်တို့ အိမ်နားမှာ ရောင်းတဲ့ဟာလဲ ကောင်းတယ်လေ...
ငါတို့ ကို ကြီးကြီးလား မသိ...ဝယ်ကျွေးဖူးတယ်လေ...
Tin Lay Nwe said...
Thank you very much for the recipe...I like it very much and tried it several times. But, I can't get crispy one. The one you made looks crispy at the edges...I will have to try your recipe....
အဲမုန့်တွေကိုမစားဖူးဘူးအမရဲ့...တောကျပုံများပြောပါတယ် မုန့်ဆိုချိုမှပဲကြိုက်တယ် ။ တခြားအစပ်တွေ အရသာမှုန့်တွေ ပဲပြုတ်တွေပါတဲ့ဟာဆိုမုန့်လို့မှတ်တာမှုတ်ဖူး:D
ဒါပေမယ့် အမတန်ခူးလုပ်ထားတာ စားချင်စရာလေးး)
အမရေ မုန့်ပျားသလက် ဆိုတာ ရေမုန့်နဲ့တူတူပဲလားဟင်
ရေမုန့်ကပါးပြီး မုန့်ပျားသလက်က ထူတယ်
Happy call အိုးလေးတွေ ခုတော်တော်ဈေးသက်သာနေပါပြီ ကိုအမည်မသိရေ. ဝယ်ပေးဖို့ နာမည်လေးတော့ပြောဦးလေ
ဟုတ်တယ် မေရေ. ကိုယ်တိုင်လုပ်စားတော့ အန္တရာယ်လဲကင်းတယ်နော်. လုပ်ရတာ သိပ်မခက်ပဖဲစားလို့ လဲကောင်းတယ်
မ ရေ. ဖြစ်နိုင်တယ်နော်. လမ်းသရဲမုန့် တီထွင်သူဆရာကိုဧရာဆိုတာလေ. လမ်းသဲမုန့်သက်တမ်းက သိပ်မှမကြာသေးတာ
သက်ဝေ ရေ. ဝယ်ပေးမှာပေါ့. ဘာအရွယ်လဲသာပြော
သူငယ်ချင်းစုချစ်ရေ. ဟုတ်တယ် အဲဒီဆိုင်ပဲလေ. မှတ်မိသေးတယ်နော်
ချစ်မကြီးရေ. ကြွတ်ဖို့ ဆီနာနာလေးပုတ်ပေးရတယ်
ညီမဆုမြတ်မိုး ရေ. အိမ်လာလည်လေ. လုပ်ကျွေးမယ်
ညီမလေးAdoraရေ. မတူဘူးညီမရေ မုန့် ကတခုလုံးကြွတ်နေတာလေ. ရေမုန့် သူများလုပ်တာ မြင်ဖူးတာတော့ အရင်နဲနဲထူထူလေးလုပ်ပြီး ပါးနေအောင် ခြစ်ထုတ်ပလိုက်တာ.